Nzira yekusika yakanakisisa backlink nzira ye webhusaiti yako?
Nyaya iyi yakagadzirirwa kuwana mhinduro pane imwe yemibvunzo inowanzobvunzwa "Nzira yekudzorera sei webhusaiti?" Maitiro akawanda ekugadzira mazano anobvumira kuti tive nekubatanidza kune dzimwe nzvimbo dzakasangana niche. Zvisinei, havasi vose vanogona kunzi organic. Muzvokwadi, hapana imwe chete, yekupedzisira yekugadzira sangano hurongwa hunovakirwa chete pamagariro ehupenyu. Kune mamwe mawebsite, imwe sarudzo inogona kupa zvakanaka SEO migumisiro uye inopa mikana yakanaka yekuvaka mashizha - other computer experts. Nzira imwechete kune vamwe inogona kuonekwa kwete yepamusoro kana yekutengeswa kwekodhi.
Sezvo nguva ichienderera mberi, nzira dzakasiyana dzekugadzirisa maitiro dzinowanzoita kuti dzive dzakawanda kana zvishoma. Vamwe vanobatanidza maitiro ekugadzira vanogona kushanda zvakanaka kwekanguva, uye zvino vashandisi mafungiro anotanga kuchinja uye saka sarudzo yako inofanira kuchinja.
Ungaronga sei hurongwa hwekuvaka chikwata chako?
Kugadzira hurongwa hwako hwekuvaka chikwata, unofanirwa kutarisa kumativi ose sarudzo yakasiyana kunyanya mumisika yako yemisika. Chengetedza vose kuti vanzwisise kuti zvipi zvinoshanda zvakanakisisa mubhizinesi renyu rekuInternet. Enda nemabasa anoshanda uye edza pfungwa itsva zvakare. Iro nguva dzose zvokudya zvekuwana mikana yekukunda mazano ekugadzira mazano sezvo ichikupa mukana wekuumba huwandu hwehuwandanisi hwehuwandu hwehuwandu. Sezvo yemakethe yemakambani iine shanduko inogara ichichinja, zvichava zvakanaka kuti urambe uchiedza nzira itsva.
Nei zvakakosha kushandisa mapurogiramu ekuvakisa mazano?
Mazuva ano, kune matani emapurogiramu ekuvakira mazano anongogadzirirwa kupinza mari yako kunze. Vanovimbisa webmasters kuti vape mazana emakumi ezviuru zve backlink kubva munzvimbo dzepamusoro dzakakwirira munguva pfupi. Vanhu vane ruzivo rwekutsvaga injini yekusimudzira sphere vanoziva kuti hazvisi nyore uye zvinonzwika zvakanaka kuti zvive zvechokwadi. Muzvokwadi, chiito chekuvaka chivako chinotora mwedzi uye inoda kushanda nesimba zvakaoma. Kunyangwe kana spammy chikwata chekuvaka chibvumirano chichishanda, zvino, Google inogona kuiona uye ichida, kana kunyanya kuvhara nzvimbo yako nezvakaipa zvakakura. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kudzivisa zvirongwa zvakadaro uye unofunga nezvemaitiro ekugadzira mazano ehupenyu.
Zvinhu zvakasununguka kumashure zvakakodzera!
Zvakasununguka kumashure ndezvokubatanidza zvaunowana kunze kwekukumbira mumwe munhu kuti aise chibatanisi chendaneti yako. Semitemo, unowana hukama hwakadaro pasina ruzivo rwako. Inoshanda zvakajeka zvikuru. Semuenzaniso, unowana nyaya yaunofarira uye unobatanidza nayo pawebsite yako. Iwe unofanirwa kuziva kuti Google inoda mashizha ehupenyu uye zvikomborero zvewezviiti zvinozviita ivo nepamusoro pepamusoro peji yemhinduro. Ndokusaka rudzi urwu rwekubatana ndiro rakachengeteka. Iwe unogona kunge wakajeka kuti havazombotarisidzwi neGoogle.
Chivakwa chekubatanidza chinoshanda pachako
Mumwe webhusaiti webhusaiti anotarisa sangano rekuvakira rinogona kushanda pasina kunyatsoteerera. Kana iwe uchida kuwana zano risingadi basa rako remazuva ose pasi pekubatanidza rimwe nerimwe, mabhulogi ndiyo mukana wakanakisisa kwauri. Chinhu chose chaunoda ndechokuti uite bhuti yakatevedzana nehurukuro yako yehurumende nekuenderera mberi kune iyo inobata zvinyorwa zvingabatsira kune vashandisi. Kana iwe unogona kupa vashandisi zvine zvinyorwa zvinobatsira, vanozobatanidza kune zvinyorwa zvako uye kugadzira huwandu hwehupenyu hwehuwandu hwewebsite yako.